प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार खर्च कति ?
फागुन ३०, काठमाडौं । दोस्रोपटक मृगौलाको प्रत्यारोण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । गतहप्ता बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गराएका ओली शुक्रबार साँझ डिस्चार्ज भएका हुन् । चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको भाइटल र ल्याब सूचकहरु राम्रो अवस्थामा रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज हुनुअघि मन्त्रीहरु अस्पताल पुगेका थिए । मृगौला प्रत्यारोपण गराएको १० औं दिन डिस्चार्ज एका ओलीलाई उनकी भाञ्जी समीक्षा संग्रौलाले मृगौला दिएकी थिइन् । संग्रौला यसअघि नै डिस्चार्ज भएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीको १२ वर्षअघि भारतको एपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।
उच्च सावधानी अपनाउन चेम्बरका अध्यक्ष न्यौपाने द्धारा नगरवासीमा आग्रह
कोरोना प्रकोप : शुक्रबार कुन देशमा कति जनाकाे ज्यान गयाे ? (सुचिसहित)
अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा र लामो दुरीको यातायात बन्द गर्ने घोषणा